Ikhaya » izithuba » Iindaba ezijongene noKhenketho » Ukuhamba kancinci kweendlela kunokuba yinto enkulu elandelayo yokhenketho
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuQasha iMoto • Iindaba zoMsebenzi woHamba • IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • Iindaba zeNkcubeko yokuHamba • Iindaba zokuhamba zaseYurophu • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Ukuhamba ngololiwe • ukwakha uhambo kwakhona • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zePaki yokuHamba ngeeNdaba • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
Ukuhamba kancinci kweendlela kunokuba yinto enkulu elandelayo yokhenketho
Ngamana 27, 2021
Abakhenkethi bakhetha ukuhlala ixesha elide ngenxa yokuba abaninzi bekwazi ukusebenza kude, kunye nozinzo olubonisa kakhulu izigqibo zokuhamba, kuyacaca ukuba ukuhamba kancinci kunokuba yinto yehlabathi kwiminyaka embalwa ezayo.
Ukuhamba kancinci kuhamba ikakhulu kubhekisa kuhambo oluthathayo
Ukuhamba kancinci kukwathetha ukuba abakhenkethi bahlala ixesha elide, benxibelelana nabantu bendawo, inkcubeko, ukutya kunye nomculo
Uzinzo luphambili kwizigqibo zabathengi
Imfuno ye-Pent-up yamava ohambo lokuntywiliselwa ngaphandle komda obekiweyo unokunceda 'ukuhamba kancinci' kube yindlela enkulu elandelayo yokhenketho. Abakhenkethi bakhetha ukuhlala ixesha elide ngenxa yokuba abaninzi bekwazi ukusebenza kude, kunye nozinzo olubonisa kakhulu izigqibo zokuhamba, kuyacaca ukuba ukuhamba kancinci kunokuba yinto yehlabathi kwiminyaka embalwa ezayo.
Ukuhamba kancinci kubhekisa kwisantya apho kuthathwa khona uhambo, apho abahambi bethatha uloliwe ngeYurophu endaweni yokubhabha, umzekelo. Nangona kunjalo, ikwanentsingiselo ebanzi yabakhenkethi abahlala kwiindawo ezihlala ixesha elide, kugxininisa unxibelelwano nabantu bendawo, inkcubeko, ukutya kunye nomculo. Oku kuthetha ukuba ukuhamba kancinci kuhamba ngokuzinzileyo kuluntu lwasekhaya nakokusingqongileyo.
Iindlela ezahlukeneyo zabathengi sele zicebisa ukuba ukuhamba kancinci kunokususa emva kwendyikitya yokufa. Uhambo olude ngaphezu kobusuku obulishumi lunqweneleka kakhulu (22%) kunosuku lokundwendwela (10%) okanye ikhefu elifutshane ukusuka kubusuku obunye ukuya kwezintathu (14%) ngokokuvota komzi mveliso. Ubunzima obongeziweyo kunye neendleko zokongezwa kwe-COVID-19 yeemfuno zokuhamba ezinje ngeemvavanyo ze-PCR kunye nexesha elinokubakho lokuvalelwa lithetha ukuba uhambo olufutshane luphulukana nexabiso, luthethelela uhambo olude.
Kukwakho nabasebenzi abakhulu abakude kwihlabathi liphela ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Ngaphezulu kwe-70% yabaphenduli behlabathi bakhethe ukusebenza ngokude okanye banomxube wazo zombini kunye nomsebenzi weofisi kolunye uvoto. Ii-ofisi ezininzi kusenokwenzeka ukuba zibhetyebhetye ngakumbi malunga neeyure zokusebenza kunye nendawo ahlala kuyo umqeshwa ngenxa yobhubhane, oko kuthetha ukuba ukudibanisa umsebenzi kunye nokuzonwabisa kuya kuba lula kubasebenzi.
Uzinzo luphambili kwizigqibo zabathengi. 'Ukuxhasa oonontlalontle' kuchongwe njengeyona nto iphambili ekuthengweni kwemveliso ye-25% yabaphenduli behlabathi kuvavanyo lwabathengi lwango-2021 kwaye i-45% kwaba 'kuhle ukuba'. Ukukhethwa kweemveliso kungabonakalisa imeko yeenkonzo kwaye oku kuchonga ukuba abathengi banokuziva bethambekele ngakumbi ekuxhaseni abahlali bendawo emva kwentsholongwane, okusisithuba esinokuthi 'sihambe kancinci'.
Ukhuphiswano sele luqinisa phakathi kwe-niche kunye ne-intermediaries eziphambili zokuhamba, ucebisa ukuba ukuhamba kancinci kuyaqinisekisa ukwenza uphawu lwayo kuhambo lwasemva kobhubhane. Abalamli abahambahambayo abanikezela ngeeholide 'zokuhamba kancinci' ukusuka kubasebenzisi be-niche ezinje ngeNdlela yokuHamba ngokuNgagungqiyo kunye nohambo olunoXanduva ukuya kubanikezeli abaphambili abanjenge-Airbnb kunye neQela le-Expedia.
Lo mkhwa we-niche ubonakalisa umnqweno okhulayo wabathengi weendlela zokuhamba ezinamava, ezihamba ngaphezulu nangaphaya komkhosi wabakhenkethi ohlanganiselwe ilanga, ulwandle kunye nesanti. Ukukhula kwayo okunokubakho kunokuphinda kuhambisane nembono yokhenketho oluninzi kunye nomxholo weholide wephakheji ebandakanya konke ekubuyiseleni indawo Covid-19.